FIVADIHANA FIARA : Olona iray namonjy ny JMJ Mada faha-IX namoy ny ainy
Nanomboka ny sabotsy hariva dia misy fepetra manokana fanampiny amin’ny lalam-pirenena fahaefatra. 9 octobre 2018
Eo Andranofeno akaikin’ Ankazobe, faritra Analamanga, Tsiafabositra akaikin’i Maevatanàna faritra Betsiboka, ary Ambondromamy eto amin’ny Faritra Boeny. Amin’ireo toerana ireo dia misy Ambulance, dokotera miaraka amin’ny ekipana mpamonjy voina, zandary sy mpiasa eo anivon’ny ATT. Rehefa misy loza mitranga dia antsoina izy ireo ary mandeha mamonjy any ny dokotera miaraka amin’ny mpamonjy voina. Tamin’ilay loza niseho teo akaikin’ Ankazobe ka namoizana ain’olona iray dia niasa io fepetra io.
Tonga namonjy teny ny ekipa tao Andranofeno. Ny tale jeneralin’ny ATT miaraka amin’ny fiara mpanara-maso dia mbola mivezivezy eny amin’ny toerana nisehoan’ny loza manamafy ireo fepetra hisorohana ny loza. Ny hafatry ny ATT dia tsy mandeha amin’ny alina raha mbola azo atao fa amin’ny antoandro. Tokony handeha milamina ny mpampiasa lalana rehetra ary samy hitandrina. Miantso ny mpiandraikitra isaky ny fiara mba samy hitandrina sy hiteny ny ankizy tsy hanapaka arabe raha azo atao, ary mizara roa rehefa mijanona ny lehilahy amin’ny ilany an-kavia, ny vehivavy amin’ny andaniny an-kavanana. Izany dia hisorohana ny loza rehetra mety hitranga eny an-dalana.